Saky Steel Co., Ltd waxa uu ku yaalaa Gobolka Jiangsu. Shirkadda waxaa la aasaasay bishii 1995. Hadda shirkadda daboolaa gebi ahaan 220,000 oo mitir oo laba jibbaaran. Shirkadda ayaa shaqaale total of 150 ka mid ah 120 kii waa xirfadleyaal shirkadda .Oo ayaa had iyo laftiisa ballaarinta tan iyo markii uu aasaasay. Haddaba shirkadda waa ISO9001 ah: 2000 shirkadda shahaado ayaa had iyo abaal by dawladda hoose.
Shirkadda dhex dikhaw steel maalgashiga iyo dhidbey dhul xasilooni resume warshad, tiro balaadhan oo ah la heli karo resources.Main soo saaro iyo habka ahama bar / ul / usheeda dhexe / profile, ahama beebka / tube, gariiradda ahama / sheet / saxan / strip, ahama silig steel / silig waxyaabaha sahayda shirkadda ul / silig rope.Our ka SAKY, TISCO, LISCO, BAOSTEEL, JISCO iyo si on.We astaysto aan caadiga ahayn waxyaabaha ahama gaar ah oo tayo sare leh waqti gaaban. Waxyaabaha Our loo isticmaalaa in qalabka daaweynta kiimikada, taangiyada kiimikada, qalabka kiimikada iyo ulo jaraa'id. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in tababarayaasha tareenka, wax soo saarka dheecaan saqafka, meegaarka albaabada duufaanka, mashiinada cuntada iyo weelka.
Shirkadda Our horumariyo suuqyada caalamka ka badan 20 sano, oo la aasaasay iskaashi muddo dheer la Germany, South American, Australia, Saudi Arabia, koonfur bari Asia. iwm. Annagu waxaannu noqon doonnaa on aasaasiga ah ee maamulka sare iyo fikirka adeeg si ay u bixiyaan waxyaabaha tayo sare leh iyo adeegga fiican oo dhan ganacsiga wax soo saarka ah. Waxaan soo dhawaynaynaa macaamiisha adduunka oo dhan ka ah in ay iskaashi nala.